एनआरएनएको नवौं क्षेत्रिय सम्मेलन न्युजर्सीमा हुँदै :: Press Chautari ::
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नवौं क्षेत्रिय सम्मेलन अमेरिकाको न्युजर्सीमा सम्पन्न हुने भएको छ । अगस्ट २७ र २८ तारिख सम्पन्न हुने संघको उक्त सम्मेलनलाई “भिजन २०–२० एण्ड बियोण्ड” नारासहित बिशेष रुपमा आयोजना गर्न लागिएको हो । सम्मेलन न्युजर्सीको नेवार्क विमानस्थल नजिकैको डब्बल ट्रि, हिल्टन होटेलमा सम्पन्न हुन लागेको हो ।
सम्मेलनकै विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले गत आईतबार न्युयोर्कमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष डा. केशव पौडेलले सम्मेलनको तयारी युद्धस्तरमा भईरहेको बताए । “नवौं क्षेत्रिय सम्मेलन अमेरिकाबासी नेपालीहरुको प्रतिष्ठासँग जोडिएको कार्यक्रम भएको कारण पनि सम्पूर्ण अमेरिकाबासी नेपालीहरुलाई सहभागिता र सहयोगको अपेक्षा गरेकाछौं”-डा. पौडेलले भने ।
पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उत्तर अमेरिका क्षेत्रिय संयोजक सोनाम लामाले आसन्न क्षेत्रिय सम्मेलन “भिजन २०-२० एण्ड बियोण्ड” भन्ने मूल नारासहित बिशेष रुपमा आयोजना हुन लागेको बताए । संघका संरक्षक, सल्लाहकार एवं बिभिन्न ७३ देशका एनआरएन पदाधिकारीहरुको बाक्लो उपस्थिती रहने उक्त कार्यक्रमलाई भव्य एवं सभ्य रुपमा आयोजना गर्नको लागि सबैले साथ र सहयोग गर्नु पर्ने लामाले बताए ।
सम्मेलन आयोजनाको लागि सोनाम लामाको संयोजकत्वमा दश सदस्यीय आयोजक समिति र बीस सदस्यीय उप–समितिको गठन गरिएको छ ।
सम्मेलनको लागि १० हजार, ७ हजार पाँच सय, ५ हजार, ३ हजार र १ हजारमा क्रमसः इभेन्ट पार्टनर, प्लाटिनियम, गोल्ड, सिल्भर र सर्पोटरको रुपमा प्रायोजन गर्न सकिने ब्यावस्था गरिएको छ । यसैगरी सम्मेलनमा सहभागिताको लागि २०० अमेरिकी डलर कायम गरिएको र उक्त रकमबाट दुई लञ्च र दुई डिनरको व्यवस्था गरिएको आयोजकले बताएको छ ।
मंगलवार, २०७३ जेष्ठ २५ गते २१:४६ / Tuesday, Jun 07, 2016 9:46 pm